जब ती पुरुषले आकस्मिककक्षमा मलाई एक्कासि ‘टुल’ प्रहार गरे… – Health Post Nepal
जब ती पुरुषले आकस्मिककक्षमा मलाई एक्कासि ‘टुल’ प्रहार गरे…
२०७६ जेठ १६ गते १९:१९
जेठ १४ गते, मंगलबार, रातिको करिब १० बजेको समय थियो । म अस्पतालको आकस्मिककक्षमा बिरामी हेर्दै थिएँ । एकजना अपरिचित महिला आएर आफ्नो पेट दुखिरहेकाले उपचार गरिदन गुनासो पोख्नुभयो । उहाँ १ महिनाअघि गर्भवती हुनभएको रहेछ । करिब ३ दिनदेखि योनिबाट रगत बगिरहेको सुनाउनुभयो । उहाँको समस्यामाथि विचार गर्दा भिडियो एक्स–रे गरेर रिर्पोटका आधारमा मात्रै उपचार गर्नु अवस्था थियो । तर, अस्पतालमा राति भडियो एक्स–रे सेवा उपलब्ध नभएका कारण बिरामीलाई अन्यत्रै उपचार गराउन सल्लाह दिएँ ।
बिरामीसित आउनुभएका आफन्तले उहाँलाई अन्य अस्पतालमा उपचारका लागि लैजानुभयो । तर, रातिको समयमा अन्य अस्पतालमा पनि उपचार सम्भव नभएपछि पुनः म भएको आकस्मिक कक्षमा आउनुभयो । र, एक्कासि ‘किन उपचार हुँदैन ?’ भन्न थाल्नुभयो । बिरामीलाई सम्झाउँदै ‘अस्पतालमा भिडियो एक्स–रे दिउँसो मात्र हुन्छ, रातिको समयमा हुँदैन’ भनेँ । तर, बिरामीका आफन्त झन् आक्रोशित हुन थाल्नुभयो । म उहाँहरूलाई सम्झाउँदै थिएँ । अकस्मात् उहाँसँगै नजिकमा उभिनुभएका एक पुरुषले टुल उचालेर ममाथि प्रहार गर्नुभयो । तर, संयोगवश म त्यो प्रहारबाट बचेँ । उहाँले मलाई पटक–पटक हातपात गर्न खोज्नुभयो, गाली–गलौज गर्नुभयो, मुखमा आएजति अपशब्द सबै बोल्नुभयो ।
असुरक्षित अवस्थामा कसरी बिरामीलाई उचित सेवा दिन सकिन्छ र ? त्यसैले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा दिनरात नभनी बिरमीको सेवामा खटिने स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने यस्ता घटनाका दोषीलाई कडा कारबाही हुनु जरुरी छ । यस्ता अवाञ्छित गतिविधिलाई समयमै निरुत्साहित गर्न सकिएन भने सेवाप्रवाहमै समस्या सिर्जना हुन्छ, काम गर्ने वातावरण नै रहँदैन ।
विनाकारण बिरामीका आफन्तले यस्तो व्यवाहार देखाएपछि म अकमक्क परेँ । आफ्नो पेसाप्रति वितृष्णा पनि जाग्यो । आफू असुरक्षित भएको महसुस गरेर त्यहाँ रहेका स्टाफलाई प्रहरी बोलाउन भनेँ । केही समयमा प्रहरी आइपुग्यो र उहाँहरूलाई बाहिर निकाल्यो ।
म २ वर्षदेखि हेटौँडा अस्पतालमा कार्यरत छु । सुरुदेखि नै अस्पतालकै आवासगृहमा बस्दै आएकी छु । बिहान–दिउँसो–बेलुका मिलाएर डिउटीमा खटिँदै आएकी छु । अस्पतालमा डाक्टरमाथि आक्रमणको घटना यो पहिलो होइन । पछिल्लो १ वर्षमा मात्र यो तेस्रो घटना हो । यस वर्ष २ वटा यस्ता घटना यसअघि नै भइसकेका छन् । बिरामीकै सेवामा खटिएका हामी डाक्टर पटक–पटक बिरामीबाटै आक्रमणमा पर्दै आएका छौँ, अपमानित हुँदै आएका छौँ । यस्तो असुरक्षित अवस्थामा कसरी बिरामीलाई उचित सेवा दिन सकिन्छ र ? त्यसैले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा दिनरात नभनी बिरामीको सेवामा खटिने स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने यस्ता घटनाका दोषीलाई कडा कारबाही हुनु जरुरी छ । यस्ता अवाञ्छित गतिविधिलाई समयमै निरुत्साहित गर्न सकिएन भने सेवाप्रवाहमै समस्या सिर्जना हुन्छ, काम गर्ने वातावरण नै रहँदैन ।
आज रातिसम्म स्वयम् उपस्थित भएनन् भने भोलि सार्वजनिक मुद्दा चलाउँछौँ
आक्रमणकारी हेटौँडा उपमहानगरपालिका–८, कमानी निवासी बिरामीका ससुरा रहेको खुलेको छ । प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको बताएको छ । हामीले उनीविरुद्ध प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत जाहेरी दिइसकेका छौँ । हामी आज रातिसम्म हेर्छौं, दोषी आफैँ उपस्थित भए भने ठिक छ, अन्यथा भोलि हामी मुद्दाको प्रक्रियामा जान्छौँ । उहाँमाथि सार्वजनिक मुद्दा चलाउने तयारी छ ।
डा. वन्दना अधिकारी